Osimiri Thames: njirimara, mbido, fauna na mmetọ | Netwọk Mgbasa Ozi
N'ihi na England enweghị ezigbo ntụpọ ọ nwere enweghị ọtụtụ osimiri. Naanị osimiri nke nwere nnukwu ihe a Osimiri Thames. Ọ bụ otu n'ime ndị a kacha mara amara n'ụwa ma ọ bụ maka ikewa London na ụzọ abụọ. Na mgbakwunye, ọ bụ isi iyi nke mmiri na mba.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, mbido, akụrụngwa na mkpa Osimiri Thames.
2 Isi iyi nke osimiri Thames
3 Osimiri mmiri nke Thames
4 Mmetọ na mmetụta
Ọ bụ nnukwu osimiri kachasị ukwuu na England nke na-asọba n’Oké Osimiri Ugwu ma jikọta isi obodo agwaetiti ahụ, London, na Oké Osimiri Ugwu. N'ịbụ agwaetiti, ogologo ụbọchị adịghị ka nke osimiri ndị ọzọ dị na kọntinent, mana o yiri nke osimiri ndị ọzọ na Europe. Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere mgbatị dị ka nke osimiri Segura na Spain. Isi mmalite a sitere na njikọ nke osimiri 4: Osimiri Churn, Osimiri Coln, Osimiri Isis (nke a makwaara dị ka Osimiri Windrush), na Osimiri Leach.
Isi mmalite nke Osimiri Thames sitere na oge Pleistocene, nke mere eji ewere ya dị ka osimiri na-eto eto. N'oge ahụ ọ na-asọ site na mmalite ya site na Wales ruo Clacton-on-sea. N’okporo ụzọ ya, ọ gafere Osimiri Ugwu niile ka ọ bụrụ akụkụ nke Osimiri Rhine. N'oge ahụ ọ bụ otu n'ime ụzọ kachasị mkpa maka nkwukọrịta na njem n'etiti Westminster na London n'oge narị afọ nke XNUMX na XNUMX.
Otu ihe mmasi nke osimiri a bụ na ọ jụrụ oyi otu ugboro na 1677 ma kemgbe ahụ ọ naghị eme ya ọzọ. Ihe kpatara nke a bụ na edozigharịrị London Bridge niile na ọnụọgụ na ugboro ole a na-ebu ya na-ebelata nke na-enye ohere ka ọ na-asọfe n'ụzọ dị mfe. N’ụzọ dị otu a, site na ịgba ume ka osimiri ahụ gaa ọsọ ọsọ, mmiri na-eme ka oyi na-atụ.
Isi iyi nke osimiri Thames
Ka anyị hụ ihe isi iyi, ụtụ na omimi nke Osimiri Thames nwere. Routezọ mmiri niile nke osimiri ahụ na-ahapụ echiche nke isi mmalite ya. E nwere ọtụtụ obodo na-ekwu na ọ bụ ebe mmiri a si enweta mmiri. Osimiri Thames sitere na isi Thames na isi asaa. N’oge kachasị oyi n’afọ na nke kachasị nke mmiri mmiri, ọ bụ oge zuru oke iji gaa ebe a. Ọ bụ otu n'ime ebe kachasị mma iji hụ ka osimiri ahụ na-asọ n'akụkụ ihe ncheta ahụ.
Osimiri mmiri nke Thames
Osimiri a abughi nani ebe o kewa England na uzo abuo kamakwa amara ya maka uzo ya. N’afọ iri gara aga, e dekọtara ọnụ ọgụgụ nke mammals mebiri ndekọ. Otu a raara nye na nlekota na nchekwaba anumanu debara aha otutu ihe kariri puku umu anumanu iri abuo n'ime iri gara aga. Imirikiti anụmanụ ndị achọpụtara nke otu ìgwè anụmanụ na-enye anumanu nke Osimiri Thames bụ akàrà. A na-azọrọ na a hụrụ dolphin na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50 whale.
Ọnụ ọgụgụ ndị a niile dị iche na nke afọ 50 gara aga mgbe ekwuputara ogige ahụ n'ọnọdụ nke ndu ndu. N'agbanyeghị ihe ndị mmadụ na-eche ma ha gaa London ma hụ Osimiri Thames, ha na-edebe ọtụtụ anụ ọhịa. Dịka ọmụmaatụ, a na-eme emume ịgụ swans kwa afọ ebe a na-agụ nnụnụ ndị a niile mara mma yana ụmụ ha na-enyocha nke ọma site n'aka ndị otu dibịa anụmanụ na ndị sayensị maka ọrịa.
A machibidoro ịchụ nta na ịnakọta akwa swans kpamkpam ebe ọ bụ na nnụnụ ndị a dị ezigbo mkpa maka ọrụ niile nke okpueze rụrụ na narị afọ nke XNUMX. Edebewo ọnụọgụ nnụnụ ndị a maka afọ niile sochirinụ dịka ọdịnala na otu iji hụ na echekwara ụdị a. Tụkwasị na nke a, ha na-enye ọmarịcha ịma mma a na-enweghị ike ịgụta ọnụ ọdịdị ala nke na-eme ka ọ bụrụ ihe okike. Mbelata nke ụdị bụ eziokwu kemgbe afọ 200 gara aga ị nwere ike ịhụ okpukpu abụọ nke swans dị taa. Ndị dinta na-akwadoghị iwu, nkịta na mmetọ nke osimiri n'onwe ya belata ọnụ ọgụgụ ịnyịnya.
Mmetọ na mmetụta
Ekwesiri iburu n'uche na obu osimiri nke gabigara n'etiti obodo buru ibu ma emetuta mmetuta. Ọ bụ ọnọdụ dị oke elu nke mmetọ na agbatị ya maka kilomita 70 site na mpaghara Gravesend ruo mkpọchi Teddington kemgbe ihe nlere nke emere na 1957 kpebiri na odighi azu obula nwere ike ibi n'ime mmiri a.
Mgbe ọ na-enweghị ọkwa mmetọ, Osimiri Thames bụ ebe zuru oke maka salmọn ịkpapụta na azụ ndị ọzọ, na azu dika azu dika omenaala. Ka obodo ahụ na-eto, ọnụọgụ ndị mmadụ na-amụba, ọnụ ọgụgụ mkpofu e kwuru na osimiri ahụ mụbara. A tụfuru ya ruo ọtụtụ afọ, mana mgbe 1800 gasịrị, ọ bụ n'ezie mgbe mmetọ ahụ ghọrọ nnukwu nsogbu.
Mmiri niile malitere ịbụ nke e metọrọ emetọ ma emesighi ya. Ihe ndi a nile gbalitere gbasaa nje na-ebelata ikuku oxygen na mmiri Ọ bụ ihe dị mkpa maka ụbọchị azụ na mmepe nke ahịhịa mmiri. Iji belata nsogbu ndị a, e mere atụmatụ iji weghachite osimiri ahụ, na-ahụ uto nke ụlọ ọrụ kemịkal na-abawanye, nke mere ka mmetọ a ka njọ. Chemicallọ ọrụ na-emepụta ọgwụ na ụlọ ọrụ gas tụfuru ihe niile mkpofu n'ime osimiri ma ọ bụ mee ka mmetọ ahụ ka njọ.
Taa ọ ka emetọla mana ugbu a ọ bụ otu n'ime osimiri kachasị dị ọcha nke na-agafe obodo. Ọrụ mgbake ahụ ka siri ike mana enwetalarị nsonaazụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Osimiri Thames na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Osimiri Thames
Alps nke Scandinavian